Dayz Hacks 🥇 Cheats၊ Aimbot၊ ESP၊ Wallhack - Gamepron
ဤနေရာတွင် Gamepron ၌သာ ဦး ဆောင်သော DayZ hack များကိုရယူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူများအားမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်နှင့်မျှမတူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန် DayZ Wallhack, Aimbot, ESP, Radar နှင့်အခြားစွမ်းဆောင်ချက်များစွာကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။
DayZ Hack ကိုဝယ်ပြီးပြီလား။ ဒီမှာနောက်ခြေလှမ်းများကိုရှာပါ
ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ DayZ hacks များကိုမ ၀ ယ်မီသင်ဝယ်ယူရန်သင်ရှာဖွေနေသည့် tool ကိုမကြာသေးမီကနောက်ဆုံးပေါ်သို့မဟုတ်အသစ်ဖြစ်နေဆဲရှိကြောင်းသေချာပါစေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများကိုအမြဲတမ်း update လုပ်နေစဉ်အချို့အခြေအနေများတွင်အချိန်ဖြန့်ဝေမှုနှေးကွေးသည်။ များသောအားဖြင့်ချက်ချင်းဆိုသလို၊ နာရီအနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများအားလုံးသည် HWID သော့ခတ်ထားခြင်းခံရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်၎င်းတို့ကိုကွန်ပျူတာတစ်လုံးတည်းတွင်သာအသုံးပြုနိုင်သည် - သင်၏ကွန်ပျူတာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများအားလုံးနှင့်အဆင်ပြေကြောင်းသေချာပါစေ။ product product ကိုကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်ပြန်အမ်းမှာမဟုတ်ဘူး။
ငါတို့ရွေးချယ် DayZ hack
ယ်ယူရန် DayZ Hack in4ခြေလှမ်းများ
DayZ ကို Gamepron ၌ရနိုင်သည့်ဂိမ်းမျိုးစုံမှရွေးပါ
သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော hack လုပ်ဆောင်ချက်များကိုရွေးချယ်ပါ။
Gamepron တွင်သာတွေ့ရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့် (နှင့်လုံခြုံသော) ငွေပေးချေမှုပရိုဆက်ဆာကို အသုံးပြု၍ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသော့ကို ၀ ယ်ပါ
ထုတ်ကုန်သော့ကို ၀ ယ်ပြီးနောက်သင် DayZ hack ကိုရယူနိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့် Gamepron DayZ hacks?
DayZ ရဲ့ devs တွေကဂိမ်းရဲ့နောက်ထပ် patch အတွက်သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအတိအကျမပြောသေးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် Bohemia ကထုတ်လွှင့်တဲ့ tease အချို့ကိုကြည့်ဖို့ကစားသမားတွေကစိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်။ လျှို့ဝှက်ရေဒီယိုမက်ဆေ့ခ်ျများကလာမယ့်ရန်သူအသစ်ကိုအရိပ်အမြွက်ပြောတတ်တဲ့ကြီးမားတဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုအချို့ကနေလွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်လို့ကစားသမားတွေကိုထောက်ပြခဲ့တယ်။
DayZ အတွက် Update 1.13 သည်လက်နက်သစ်များစွာကိုပြသခဲ့သော်လည်း M16 ချေမှုန်းရေးရိုင်ဖယ်နှင့်အတူပေါက်ကွဲစေသောမီးသေနတ်ပစ်လွှတ်မှုမှ လွဲ၍ ဘာဂိမ်းမှမပြောင်းလဲပါ။ ဒီ့အပြင်တိုးချဲ့မဂ္ဂဇင်းအသစ်အချို့အပြင် tinctures ကဲ့သို့ပစ္စည်းအသစ်များလည်းဖြန့်ချိခဲ့သည်ကိုတွေ့ရသည်။
DayZ ကိုမကြာသေးမီက 1.13 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီးဂိမ်းတွင် feature အသစ်များနှင့်လက်နက်အချို့ကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အထင်ရှားဆုံးဖြည့်စွက် M16A2 ၏၎င်း၏လောင်ကျွမ်းခြင်းမီး mode နှင့်အတူဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်ကွဲပြားခြားနားသော machete မျိုးကွဲများထပ်မံဖြည့်စွက်ချက်တွင်လည်းထည့်သွင်းထားသည်။
DayZ အတွက်အဆင့်မြှင့်တင်မှု ၁.၁၂ ဖြန့်ချိမှုနှင့်အတူ Bohemia Interactive မှလက်နက်၊ လက်နက်၊ တံစဉ်၊ ဓား၊ ယခုဂိမ်းတွင်မြေမြှုပ်မိုင်းများကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည့်စွမ်းရည်ပါရှိသည်။ အပင်များနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုစိုက်ပျိုးရန်ဖန်လုံအိမ်များကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Gamepron သည် DayZ ကစားနည်းကိုပြောင်းလဲတော့မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်သည့်ကိရိယာများသည်ပွဲများကိုအနိုင်ရရန်သင်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်။ DayZ ကဲ့သို့သောဂိမ်းတစ်ခုတွင်အောင်မြင်မှုပိုရရန်အတွက်သင်သည်အခြားသူများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်နေရာအထိသင်၏လက်နက်များနှင့်အမိုးအကာများကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်များသောအားဖြင့်အချိန်လိုသည်။ အရင်းအမြစ်များကိုစုဆောင်းခြင်းနှင့်အခြားသောအခြားဒဏ်ofာရီများအားလုံးသည်ဂိမ်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပျင်းစရာကောင်းသည့်အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် DayZ ၏ hacks များကိုသင်အသုံးပြုချင်သောကြောင့်သင်နှင့်ဆက်နွယ်သော“ ပျင်းစရာကောင်းသည့်ကြိတ်ခြင်းကို” ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ကစားသည်။ ဒီဂိမ်းရဲ့ကောင်းတဲ့အပိုင်းတွေကမင်းကိုဝန်းရံနေတဲ့ဖုတ်ကောင်တွေနဲ့အခြားကစားသမားတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတာပါပဲ။ adrenaline အလုအယက်ကစားသမားများကိုဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုပျော်စရာကောင်းအောင်ကစားပေးသည်။ မြင်ကွင်းကိုယ်နှိုက်ကအားရရွှင်လန်းဖွယ်ကောင်းသောအသံဖြစ်သော်လည်း DayZ ၏မှန်ကန်သော cheat များမှအကူအညီမပါဘဲသွားရန်ခက်ခဲသည်။
သင် DayZ တွင်လိမ်လည်လှည့်ဖျားသည်ဖြစ်စေ၊ ပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်ရန်ရှာဖွေနေသည်ဖြစ်စေ Gamepron သည်ရှင်သန်ရန်လိုအပ်သည့် cheat များအားလုံးကိုသင့်အားထောက်ပံ့နိုင်သည်။ အခြားကစားသမားများကသင်၏ lob ည့်ခန်းတစ်ခုလုံးကိုမည်သို့အောင်မြင်နိုင်မည်ကိုစဉ်းစားနေပြီးအချို့ကသင့်ကိုသူငယ်ချင်းအဖြစ်ထည့်ရန်ပင်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ DayZ aimbot, wallhack, ESP နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာများကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ DayZ hack သည်ဝဘ်ပေါ်၌ရရှိနိုင်ဆုံးစွမ်းအားအရှိဆုံးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။
“ ပရီမီယံ” ဟုသတ်မှတ်ခံရသောဟက်ကာများကိုမကြာခဏထုတ်ပြန်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့ထဲမှအနည်းငယ်သာသည်ထိုစံနှုန်းနှင့်အညီနေထိုင်ကြလိမ့်မည်။ Gamepron မှဝယ်ယူထားသော tool တိုင်းသည်သင်၏အကောင်းဆုံးစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီရန်သေချာသည်၊ အချို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအကောင်းဆုံး developer များနှင့်သာအလုပ်လုပ်သည်။ ညာဘက် DayZ hack တွင်ပိုက်ဆံဖြုန်းခြင်းကသင့်အားဂိမ်းကစားခြင်းကိုပိုမိုပျော်ရွှင်စေရုံသာမကကစားသမားများအထွေထွေအနိုင်ရအောင်လည်းကူညီလိမ့်မည်။
WinThat War မှာလုံခြုံရေးဟာလည်းအရေးကြီးဆုံးအချက်ပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့အသုံးပြုသူများကို Gamepron tool များဖြင့် hack နေစဉ်ပိတ်ပင်ခြင်းကိုခံချင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ DayZ hack သည်ထိပ်တန်းလုံခြုံရေးနှင့်ပါ ၀ င်သည်။ ကစားသမားများကိုစိတ်ပူစရာမလိုဘဲဟက်နိုင်အောင်ခွင့်ပြုထားသည် - သူတို့က Gamepron ကိုသုံးပြီးလှည့်စားသောအခါဘယ်သူမှပိတ်ပင်ခံရသည်မဟုတ်! သင့်တွင်အကောင့်ဟောင်းရှိပါကသို့မဟုတ်တားမြစ်ချက်များကိုကိုင်တွယ်ရန်ငြီးငွေ့နေပါကကျွန်ုပ်တို့၏ DayZ hack တစ်ခုတည်းကိုသာစိတ်ငြိမ်သက်မှုပေးရန်လုံလောက်သောလုံခြုံရေးရှိလိမ့်မည်။ ဤအရာအားလုံးသည်သင်အသုံးချနိုင်သည့်အရာနှင့်တူနေလျှင်ယနေ့လက်လှမ်းမီမှုကိုရယူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ DayZ hack အတွက်ကုန်ပစ္စည်းသော့ကို ၀ ယ ်၍ သင်နှင့်ခြားနားချက်ကိုခံစားပါ။
DayZ Wall Hack (ESP) အားအချက်ပြပါ
DayZ ကစားသမားအချက်အလက် ESP (အမည်၊ ကျန်းမာရေးအရက်ဆိုင်၊ အကွာအဝေး)
DayZ Item ESP ကို ​​filter များနှင့်အတူ
DayZ စူပါခုန် mode (activated သည့်အခါမျှကျဆုံးခြင်းပျက်စီးခြင်း) ။
DayZ အရိုး & အဓိကသော့ချက်ပြင်ဆင်ရန်။
DayZ Recoil လျော်ကြေး
ကျွန်တော်တို့၏DayZ ကို Hack အင်္ဂါရပ်များ
DayZ Player ကို ESP
ကျွန်ုပ်တို့၏ DayZ Player ESP သည်သင်၏ပြိုင်ဘက်များအားခြေရာခံရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ESP (Extra Sensory Perception) အသုံးပြု၍ အစိုင်အခဲများနှင့်ကြည်လင်သောမျက်နှာပြင်များမှသူတို့ကိုကြည့်ရှုပါ။
ကစားသမားအချက်အလက်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာနိုင်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သောအခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။ DayZ hack သည်သူတို့၏အမည်များ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အကွာအဝေးများကပင်အဘယ်အရာကိုအသုံးပြုနေသည်ကိုကြည့်ပါ။
Item ESP သည်အချိန်ဖြုန်းတီးရန်မနှစ်သက်သောသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အဆောက်အအုံများကိုလုယက်ရန်အဆောက်အ ဦး များကိုကြည့်ရှုစရာမလိုတော့ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ DayZ Aimbot သည်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်စွမ်းအားအရှိဆုံးစွမ်းအားများသာရှိသည်။ DayZ cheat များ သုံး၍ သင် DayZ ၌လုပ်သမျှအတိုင်းလုပ်ပါ။
DayZ ကျည်ဆံလမ်းကြောင်း (အကွာအဝေးနှင့်အလယ်အလတ်ထိရောက်မှု)
DayZ အရိုး & အဓိကသော့ချက်ပြင်ဆင်ရန်
DayZ Aimbot ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အရိုးကို သုံး၍ ပြုပြင်ပြီး key configurable options ကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများအားသူတို့၏ hacks များကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခွင့်ပေးသည်။
DayZ မြင်နိုင်စစ်ဆေးမှုများ aimbot
DayZ aimbot ကိုမြင်နိုင်သောပစ်မှတ်များကိုရိုက်ရန်နှင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသောနေရာများတွင်ရှိသောရန်သူများကိုပိတ်ဆို့ရန် Visible Checks များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
Recoil သည် DayZ တွင်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကစားသမားများအားပစ်ခတ်စဉ်တွင်ညှိယူရန်အတင်းအကျပ်ပြုလုပ်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recoil Compensator ကိုသုံးပြီးလုံးဝဖယ်ရှားပါ။
Warning feature သည် Gamepron အသုံးပြုသူများကိုရန်သူနီးကပ်နေချိန်တွင်၊ သူတို့အသုံးပြုသူများ၏ avatar ကိုရည်မှန်းချက်ထားရန်ရည်ရွယ်ထားရင်တောင်သိစေပါလိမ့်မည်။
DayZ စူပါခုန် mode (မဖွင့်ပါကပျက်စီးခြင်းမရှိ)
ကျဆုံးခြင်းပျက်စီးခြင်းသည်သင်၏ဂိမ်း၏ရလဒ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင် Super Jump Mode ကိုဖွင့ ်၍ ကျဆုံးပျက်စီးခြင်းကိုလုံးဝပိတ်ထားနိုင်သည်။
DayZ သည်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုသူကိုအချိန်တိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးဆုကိုပေးလိမ့်မည်။ DayZ hack ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်၏အစစ်အမှန်အလားအလာကိုဖွင့်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားများပင်လျှင်သင်မည်သို့နိုင်မည်နည်းဟုတွေးမိလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ DayZ Aimbot ဖြင့်သင်၏ ESP / Wallhack ကသင့်ကိုအမြဲတမ်းအသိပေးနေစဉ်သင်၏ရိုက်ချက်များသည်အမြဲတမ်းသေစေနိုင်သည်။ မှန်ကန်သောအမှုကိုလုပ်ပြီးယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ DayZ hack ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
လူကြိုက်များသော DayZ ဟက်ကာများနှင့် cheats
DayZ ESP နှင့် Wallhack
အခွားသော DayZ ဟက်ကာများနှင့် cheat
လူကြိုက်အများဆုံး DayZ ဟက်ကာများနှင့် cheat များသည်ပွဲများစွာကိုအနိုင်ယူရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်၊ အကြောင်းမှာဤဂိမ်းတွင်အောင်မြင်မှုရခြင်းသည်သင်၏အရည်အချင်းနှင့်အများအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ DayZ သည်အမြဲတမ်းဖြန့်ချိခဲ့ဖူးသောတော်ဝင်ကစားပွဲများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကမှဖြန့်ချိခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်ထိုနေရာတွင်လူကြိုက်အများဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏စစ်တိုက်ခြင်းအတွေ့အကြုံကိုသင်ခံစားလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ DayZ hack ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သည်။ အရင်းအမြစ်များကိုစုဆောင်းခြင်းနှင့်မှန်ကန်သောနေရာများတွင်လုယက်ခြင်းများကိုသင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုကိရိယာကိုဂရုပြုလိမ့်မည်။
မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုအားသာချက်တစ်ခုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လူကြိုက်များသော DayZ hack အတွင်းပါ ၀ င်သည့်အင်္ဂါရပ်များကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အခြားကစားသမားများကအခွင့်အလမ်းကိုသာအားကိုးအားထားပြုနေရသည့်အချိန်တွင်အနိုင်ရရှိမှုသည်အရှိန်ရနေသည်ကိုသိပြီးသင်၏ DayZ ဂိမ်းများကိုသင်သွားလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ DayZ aimbot သည် Bone Prioritization နှင့်အပိုဆောင်းပြင်ဆင်နိုင်သောရွေးချယ်စရာများကဲ့သို့အသုံးဝင်ဆုံးသောအင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုထည့်ရန်မြေပြင်မှတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သေစေနိုင်သောနေရာများရှိပစ်မှတ်တိုင်းကိုပစ်မှတ်တိုင်းသင်ပစ်နိုင်သည့်အခါဂိမ်းတွင်အကောင်းဆုံးလက်နက်များမလိုအပ်ပါ။ ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူများသည်အခြား DayZ hack ကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားဝံ့ကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများသည်ဤနည်း၏အရေးအကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်သုံးစွဲသူများကို lackluster aimbot နှင့်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ ထုတ်ကုန်သော့ကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့ DayZ aimbot နှင့်လိုက်လျောညီထွေအောင်စီမံနိုင်ခဲ့သည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များအားလုံးမှအကျိုးရယူပါ။
Gamepron မှအသုံးပြုသူများကိုသူတို့၏ကစားနည်းများကိုပျံသန်းနိုင်အောင် In-game menu ဖြင့်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်၏ဂိမ်းကိုမဖွင့်မီမှန်ကန်သောချိန်ညှိချက်များမလိုအပ်တော့ (သို့) ပစ္စည်းပစ္စယများကိုပြောင်းရန်အက်ပလီကေးရှင်းကိုပင်ပိတ်စရာမလိုတော့ပါ။ သင်၏ toggling လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်ဂိမ်းတွင်းမှမှီခိုအားကိုးနိုင်သည်။
ESP နှင့် Wallhacks တို့သည်တိုက်ပွဲတော်ဝင် Royal Game များ၌မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများဖြစ်သဖြင့် DayZ hack ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အခြားရွေးချယ်စရာအများစုထက်သင့်ကိုပိုမိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ DayZ cheat တိုင်းတွင် ESP ပုံစံအချို့ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းအောင်ပွဲကိုမလွှဲမရှောင်ဖြစ်စေမည့်အမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ အခြားကစားသမားများသည်ဖုတ်ကောင်များ၊ လက်နက်ဆိုးများနှင့်အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုမသိသောအသင်းဖော်များနှင့်ဆက်ဆံရလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာက Gamepron ကိုသုံးခြင်းဖြင့်သင့်ကိုရှောင်ရှားနိုင်မှာပါ။ ESP အင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကစားသမားနှင့်အသုံး ၀ င်သည့်ပစ္စည်းများသာမကအခြားပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများစွာကိုဖော်ထုတ်နိုင်လိမ့်မည်။
Wallhacks သည်သင့်အားanရိယာသို့မသွားမီရန်သူများရှိနေသည့်နေရာကိုသင့်အားအသိပေးသည်။ Item ESP ကို ​​အသုံးပြု၍ အကောင်းဆုံးလက်နက်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။ သို့မဟုတ်သင်၏ရန်သူများအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန် Player Information ESP အင်္ဂါရပ်ဖြင့်လေ့လာပါ။
Footprint အင်္ဂါရပ်ကို Gamepron ၌သာတွေ့နိုင်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ DayZ ကစားသမားများကိုချက်ချင်းကြီးထွားစေနိုင်သည် (မှန်ကန်သောအခြေအနေတွင်မည်မျှထိရောက်သောကြောင့်) ။ DayZ မြေပုံသည်ကြီးမားပြီးရန်သူများပုန်းအောင်းနေသည့်နေရာတွင်လှည့်စားခံရနိုင်သည်ကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ DayZ cheat များအားလုံး (Footprint feature အပါအ ၀ င်) ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မည်သူ့ကိုမဆိုအနီးတစ်ဝိုက်ရှိဖော်ထုတ်နိုင်လိမ့်မည်။ အသုံးပြုသူများသည် Footprint အင်္ဂါရပ်ကိုဖွင့ ်၍ ရန်သူများနောက်ကွယ်မှနောက်ကွယ်မှမည်သည့်နေရာသို့သွားနေသည်ကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ သင်၏ပြိုင်ဘက်ကိုလိုက်ရှာခြင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ သင်၏ရန်သူများကိုထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရန်မလိုတော့ပါ၊ အကြောင်းမှာ Footprint အင်္ဂါရပ်ကသင်ရိုက်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်မချင်းအရိပ်ထဲတွင်ပုန်းခိုနေစေလိမ့်မည်။
တိုက်ခိုက်ရန်အချိန်ရောက်သောအခါသင်၏ပြိုင်ဘက်များကိုလျင်မြန်စွာသတ်ရန် High Damage ကိုလည်း enable လုပ်နိုင်သည်။ သင်ရန်သူနှင့်သင်မည်မျှနီးကပ်သည်ကိုကြည့်ရှုရန်အကွာအဝေးကိုအသုံးပြုသည်။
High Damage ကိုဖွင့်ထားသည့်အခါကစားသမားများသည်သင်၏ပစ်မှတ်၏သေစေနိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုသာပစ်မှတ်ထားလိမ့်မည်။ Footprint ကိုအသုံးပြုနေစဉ်သင်ပစ်မှတ်နှင့်မည်မျှနီးကပ်နေသည်ကိုကြည့်ရန်အဝေးမှအသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော်အတွင်းပိုင်းရှိအခြားအင်္ဂါရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ Radar နှင့် Removals တို့၏ကြိုက်နှစ်သက်မှုများသည်ဤ cheat အတွင်း၌ပင်ရှိနေပြီးကစားသမားများအနေဖြင့် DayZ ၏စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမှုအချို့ကိုဖယ်ရှားရန်ရွေးချယ်မှုပေးသည်။ Gamepron မှာသင်နှင့်အတူ hack ရန်ရွေးချယ်သောအခါမီးခိုး, မကောင်းသောအကြံအစည်များ, ယိမ်းယိုင်ခြင်းနှင့်အခြားအရာများစွာကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပံ့ပိုးပေးသူများ၏လုံခြုံရေးသည်အခြားစဉ်းစားဆင်ခြင်သူများစွာသည်သူတို့၏ anti-cheat အားထုတ်မှုများကိုဂရုမစိုက်ကြသောကြောင့်လည်းစဉ်းစားရန်ကြီးမားသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Gamepron သည်မည်သည့်လိမ်လည်မှုကိုမဆိုအသုံးပြုသူအားမည်သို့လုံခြုံစေမည်ကိုအမြဲတမ်းရည်ညွှန်းသည်။ လုံခြုံစွာနေပြီး Gamepron ၌တွေ့ရသောယုံကြည်စိတ်ချရဆုံး DayZ တိုက်ခိုက်မှုများကိုသာအသုံးပြုပါ။
DayZ Hack များ မေးခွန်းလွှာ
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DayZ Hacks
ကျွန်ုပ်တို့၏ DayZ ဟက်ကာများကိုမကျော်လွှားနိုင်ပါ၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့် hack developer များနှင့်အတူတကွတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ DayZ hacks များကိုအသုံးပြုနေစဉ်သင်ရလဒ်များကိုတွေ့မြင်လိုပါက၊ ထိုအခမဲ့နှင့်စျေးပေါသောအခြားရွေးချယ်စရာ hack များသည်အလုပ်ကိုမပြီးနိုင်ပါ။ မှန်ကန်စွာ cheat နှင့် Gamepron နှင့်အလုပ်လုပ်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်ကြောင့်ငါတို့ DayZ Aimbot
သင်နောက်တစ်ခါထပ်မံလွတ်သွားမည်မဟုတ်သောကြောင့်သင်၏ပြိုင်ဘက်များအပေါ်ကြီးမားသောအားသာချက်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ DayZ aimbot ကိုသုံးပါ။ အခြားကစားသမားများကိုသူတို့၏စွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ကျန်လိမ့်မည်၊ သို့သော်သင် DayZ aimbot ကို enable လုပ်ပြီးသင်၏ရန်သူများကို mouse ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ။ ချုံပတ်ပတ်လည်၌ရိုက်နှက်ခြင်းနှင့် Gamepron ကိုအလျင်အမြန်မသတ်ပါနှင့်။
အဘယ်ကြောင့်ငါတို့ DayZ ESP
ကျွန်ုပ်တို့၏ ESP (Extra Sensory Perception) သည်သုံးစွဲသူများအား ၀ က်ဘ်ပေါ်ရှိအခြား DayZ hack များထက်အခြားရွေးချယ်စရာများကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။ အခြားနေရာများကသင့်အားကစားသမားအရိုးစုများနှင့်အခြားမည်သည့်အရာကိုမဆိုမြင်တွေ့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း Gamepron သည် ESP ရွေးချယ်မှုကိုကမ်းလှမ်းသောအခါအသုံးပြုသူအားဤမျှလောက်များစွာပေးသည်။ ဘာလို့လက်မခံတဲ့ DayZ ESP ကိုရှာရတာလဲ။
အဘယ်ကြောင့်ငါတို့ DayZ Wallhack
Gamepron ထက်အခြားမည်သည့်နေရာမှမဆို ၀ ယ်ယူသည့် wallhacks များကိုသင်အသုံးပြုသောအခါစိတ်ပျက်စရာသည်တသမတ်တည်းခံစားမှုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ DayZ wallhack သည်ရန်သူများကိုအဝေးမှ (နှင့်အစိုင်အခဲ / မရှင်းလင်းသောမျက်နှာပြင်များမှတဆင့်) ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိစေရုံသာမကပစ္စည်းများနှင့်အခြားအရာများကိုလည်းထိုအရာ၏ထိပ်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ အကယ်၍ ဂိမ်းတွင်အကောင်းဆုံးလက်နက်များကိုတသမတ်တည်းလုယူရန်သင်ကြိုးစားနေပါကကျွန်ုပ်တို့၏ Item ESP နှင့် DayZ wallhack ကသင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်။
ဘာကြောင့်ငါတို့ DayZ NoRecoil
Recoil သည်စစ်ပွဲတစ်ခုအနိုင်ရခြင်းနှင့်သင်၏ပြေးပြေးခြင်းကိုတိုစေခြင်းအကြားခြားနားချက်ဖြစ်နိုင်သည် Recoil သည်သင်မည်သို့ကစားသည်ကိုဖော်ပြရန်မထိုက်တန်ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲသူများအား၎င်းအားလုံးလုံးဖယ်ရှားပစ်ရန်အတွက်ပြည့်စုံသောဖယ်ရှားရေးအင်္ဂါရပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ မှန်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ DayZ hack ဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများကိုပိုမိုတိကျသောရိုက်ချက်ပေးသည်။ ဒါကငါတို့ Gamepron မှာလုပ်ပေး!
အကောင်းဆုံး DayZ hack ခြင်းကိုဘယ်လို download လုပ်မလဲ။
သင်အကောင်းဆုံး DayZ hack များအားလုံးကို Gamepron တွင် download လုပ်နိုင်သည်။ သင်လုပ်ရန်မှာ product key ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများအထူးသဖြင့်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတစ်ခါမှမကျူးလွန်ဖူးသောသူများကိုစောင့်ရှောက်ရန်အတွက် download နှင့် installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ညှိနှိုင်းခဲ့သည်။ ယနေ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းတွင်တွေ့ရသောအကောင်းဆုံး DayZ cheat များကို download လုပ်ပါ။ လုံခြုံစွာနေပြီး Gamepron မှာငါတို့နဲ့အတူလိမ်တယ်။
သင်၏ DayZ ဟက်ကာများသည်အခြားသူများထက်အဘယ်ကြောင့် ပို၍ စျေးကြီးရသနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ၎င်းသည်စျေးပေါသော hack ပေးသူမဟုတ်ပါ။ Gamepron ဟာသင်ဘယ်နေရာမှာမှရှာလို့မရနိုင်တဲ့အင်္ဂါရပ်တွေပါတဲ့အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ cheat တွေအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုတိုင်းနှင့်အတူမတွေ့ရသေးသော ၁၀၀% သော cheat များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သုံးစွဲသူများကိုလုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းပေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးသည်လည်းမကိုက်ညီပါ။ DayZ hack သည်ကွဲပြားခြားနားမည်မဟုတ်ပါ။ ဘယ်အချိန်မဆိုရရှိနိုင်သည့်အကန့်အသတ်ပမာဏရှိသည်။
သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီသင့်အချိန်သတ်မှတ်ချက်ကိုရွေးချယ်ပါ။ မည်သူမဆိုနှင့်လိုက်ဖက်သင့်သောအချိန်အကန့်အသတ်များကိုပေးသည်။ Gamepron အသုံးပြုသူများကိုသူတို့၏အတွေ့အကြုံအပေါ်လုံးလုံးလျားလျားပြောင်းလွယ်စေသည်။ Gamepron တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ၁ ရက်၊ ၁ ပတ်သို့မဟုတ် ၁ လထုတ်ကုန်သော့ကိုဝယ်ယူရန်သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အခြား hack ပေးသူများသည်သင့်အားအချိန်ကြာမြင့်စွာကျူးလွန်ရန်ဖိအားပေးလိမ့်မည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသုံးပြုသူများကိုဘာမှမလုပ်စေချင်ပါ။
Awesome ကို DayZ ကို Hack အင်္ဂါရပ်များ